Dri-Eaz Dehumidifiers, Bair Equipments, Servpro yokuhlanza, Rainbow yokuhlanza - AlorAir
Amalungu yokuvuselela Umkhaya
• Amayunithi interlock
ngoba ukustaka lula
• Ikhipha conta-
• elula measure-
• Kulula usebenza
• Izindleko ngempumelelo
Hlunga / Accessoires
• izesekeli Akuphoqelekile
AlorAir yasungulwa ifilosofi yokunikeza value, umkhakha ehola izici nokusebenza kanye oluvelele nabasekela amakhastoma. Singabonisa kanjani ukuthi lokho? Nge-class emhlabeni yokukhiqiza khono, R olubanzi & D izikhungo kanye nethimba ozinikele abangane ukukusekela ngaphambi nangemva ukudayiswa.
EMelika, sinalo ukusatshalaliswa Izikhumulo empumalanga-west coast kanye inethiwekhi elikhulayo wabenza kanye nabasabalalisi. Siphinde sibe namagatsha eYurophu, e-Australia nase-Asia.
Umkhiqizo wethu umugqa okwamanje ugxile ezimakethe ezimbili - engaphansi / crawlspace nasemanzini / sokubuyiselwa.
Ukuze emakethe uzamcolo / sokubuyiselwa, sinalo umugqa egcwele dehumidifiers - kokubili orientation enezingqimba futhi mpo. Nge inhlanganisela ekilasini ehola izici, ongakhetha ahlukahlukene umthamo, futhi kalula yesondlo, dehumidifiers singaqiniseka ukuthi intandokazi. Uncoma dehumidifiers, sinalo mlonyeni kwabezindaba futhi hepa scrubbers ukusiza omiswe bese kulungiswa imizamo.
Hlanza Isihlangu HEPA 550 Air Scrubber
UZeyusi Extreme Air Movers
Indlela dehumidify emva izikhukhula? Flood d ...
Esikhathini esizayo esiseduze, ngenxa okuqhubekayo kwemvula enamandla, ezinye izingxenye zomhlaba ziye igcwele amanzi, abantu abaningi abakhahlanyezwe yizikhukhula. Emva ukubaleka uzamcolo, abalingani abaningi encane yathola ukuthi iningi ikhaya lomndeni kwaba fl ...
Dehumidifier In The Inyama Imboni ngoba saf ...
Ikakhulukazi inyama ukuphatha Frankfurter isizukulwane, nokuhlanzeka okahle emaphakathi. Lena indlela engcono kakhulu ukuqinisekisa a ehloniphekile lento izinga. Ngemva kwalokho, kumelwe esiqinile izimfanelo yokuhlanzeka wahlangana lapho nginakekela o ...
Chofoza lapha ukuze ubone kakhulu evame ukubuzwa mayelana nemikhiqizo yethu ukwelashwa emoyeni.
Sinikeza professional IAQ zikagesi, ezifana dehumidifiers, emoyeni Movers, futhi umoya scrubbers. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nathi.
Chofoza lapha ukuze ubone amavidiyo egqamisa izici, ukusebenza, kanye nokugcinwa imikhiqizo yethu.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana lokuba abasabalalisi AlorAir.
Ukuze ubuke noma ulande umkhiqizo wethu ikhathalogi, chofoza lapha
Ukuze ubone ukuthi AlorAir dehumidifiers kungaba benifit wena uchofoze lapha.
Isitolo sethu inthanethi ivuliwe njalo. Chofoza lapha ukuze bathenge AlorAir imikhiqizo inthanethi.